I-Fedora 36 sele ikhululwe kwaye iza notshintsho oluninzi, zijonge! | Ukusuka kwiLinux
Ubumnyama | 11/05/2022 01:55 | Unikezelo
Emva kweenyanga ezimbalwa zophuhliso ukumiliselwa kwe Inguqulelo entsha yosasazo lweLinux "Fedora 36" inguqulelo apho inani elikhulu lotshintsho olubalulekileyo lwenziwe, apho, umzekelo, uhlaziyo lwamacandelo ahlukeneyo enkqubo lugqamile.
Kwaye ngaba ngaphakathi I-Fedora Workstation ihlaziywe kwi-GNOME version 42, eyongeza imimiselo yokusingqongileyo-ebanzi yohlobo lobumnyama kumphambili kwaye iguqule izicelo ezininzi zokusebenzisa i-GTK 4 kunye nethala leencwadi libadwaita, elibonelela ngaphandle kwebhokisi iwijethi kunye nezinto zokwakha usetyenziso oluthobela iingcebiso ezintsha ze-GNOME HIG ( Izikhokelo zoNxibelelwano lwaBantu). Uninzi lwezicelo zenzelwe ngokwezikhokelo ezintsha ze-GNOME HIG, kodwa ezinye ziyaqhubeka nokusebenzisa isimbo esidala okanye ukudibanisa izinto ezidala nezitsha.
Ku iinkqubo ezinabalawuli abanini be I-NVIDIA, i-Wayland protocol esekwe kwiseshoni ye-GNOME yenziwe ngokuzenzekelayo, eyayisetyenziswa kuphela xa usebenzisa abaqhubi bemithombo evulekileyo. Ukukwazi ukukhetha iseshoni ye-GNOME eqhuba ngaphezulu kweseva ye-X eqhelekileyo igciniwe. Ngaphambili, ukufakwa kwe-Wayland kwiinkqubo ezinabaqhubi be-NVIDIA kwathintelwa kukunqongophala kwenkxaso ye-OpenGL kunye ne-Vulkan hardware acceleration kwi-X11 izicelo ezisebenza kunye necandelo le-XWayland DDX (Isixhobo esiXhomekekileyo X). Kwisebe elitsha labaqhubi be-NVIDIA, imiba ilungisiwe kwaye ukusebenza kwe-OpenGL kunye ne-Vulkan kwizicelo ze-X eziqaliswe kunye ne-XWayland ngoku phantse akukho nto yahlukileyo kunokusebenza kwi-server ye-X eqhelekileyo.
Kulo uhlelo oluphuculwa ngeathom lweFedora Silverblue kunye neFedora Kinoite, enikezela ngemifanekiso ye-monolithic ye-GNOME kunye ne-KDE engapakishwanga okanye engakhiwanga nge-rpm-ostree toolkit, yenziwe ngokutsha ukubeka i/var hierarchy kwi-subkey ye-Btrfs eyahlukileyo, evumela imifanekiso eqingqiweyo ye/var umxholo ukuba usetyenziswe ngokuzimeleyo kwezinye izahlulelo zenkqubo.
Xa I-systemd iyasebenza, amagama eefayile zokuqhuba ayaboniswa, eyenza kube lula ukumisela ukuba zeziphi iinkonzo eziqalwayo kwaye zimisiwe.
La ukhetho lweealgorithms zofihlo olunokwenzeka ifumaneka kwi-GnuTLS ngoku imhlophe, oko kukuthi, ii-algorithms ezivunyelweyo ziphawulwa ngokucacileyo endaweni yokukhupha ezingasebenziyo. Le ndlela ivumela, ukuba ifunwa, ukubuyisela inkxaso ye-algorithms ekhubazekileyo kwizicelo ezithile kunye neenkqubo.
Ulwazi olongeziweyo kwiifayile eziphunyeziweyo kunye namathala eencwadi kwifomathi ye-ELF malunga nokuba yeyiphi iphakheji ye-rpm eyeyayo ifayile enikiweyo. I-systemd-coredump isebenzisa olu lwazi ukubonisa uguqulelo lwephakheji xa uthumela izaziso zokuwa.
Los fbdev abaqhubi isetyenziselwa imveliso yefreyimu yesikhokelo zithathelwe indawo ngumqhubi we-simpledrm, esebenzisa i-EFI-GOP okanye i-VESA framebuffer enikwe yi-BIOS okanye i-UEFI firmware yemveliso. Ukuqinisekisa ukuhambelana okubuyela ngasemva, umaleko usetyenziselwa ukulinganisa isixhobo se-fbdev ngaphezulu kwesixokelelwano esiphantsi soMphathi oNikezelo ngokuthe ngqo (DRM). Utshintsho luphawuleka ngokulahlwa okunokwenzeka kokusebenzisa abaqhubi be-DRM/KMS kuphela. Inkqubo yokongeza abaqhubi abatsha be-fbdev kwi-Linux kernel yayekwa kwiminyaka eyi-7 eyadlulayo kwaye abaqhubi abaseleyo babenxulumene kakhulu nenkxaso yehardware yelifa.
Ukongezwa kwenkxaso yokuqala yezikhongozeli kwiifomathi ze-OCI/Docker kwi-rpm-ostree-based yohlaziyo lwe-atomic stack, iyenza kube lula ukwenza imifanekiso yesikhongozeli kunye nokufaka imeko yenkqubo kwizikhongozeli.
Izichazi-magama zeHunspell zisusiwe kwi/usr/share/myspell/ ukuya ku/usr/share/hunspell/.
Ukukwazi ukufaka ngexesha elifanayo iinguqulelo ezahlukeneyo zomqambi wolwimi lweHaskell (GHC) lunikezelwa.
Imodyuli ye-cabin ene-interface yewebhu ibandakanyiwe ekuqulunqweni ukuqwalasela ukwabelana ngefayile nge-NFS kunye ne-Samba.
Ukuphunyezwa kweJava okungagqibekanga yi-java-17-openjdk endaweni ye-java-11-openjdk.
Inkqubo yokufumana ngokukhawuleza ifayile ebizwa ngokuba yi-mlocate iye yathatyathelwa indawo yi-plocate, i-analog ekhawulezayo nengaphantsi kwe-disk-consuming.
Inkxaso yesitaki esidala esingenazingcingo esisetyenziswe kwi-ipw2100 kunye nabaqhubi be-ipw2200 (Intel Pro Wireless 2100/2200) iye yanqunyanyiswa, kwaye yatshintshwa yi-mac80211/cfg80211 stack ngo-2007.
Kwi-installer ye-Anaconda, kwi-interface yokudala umsebenzisi omtsha, ibhokisi yokukhangela ukunika amalungelo omlawuli kumsebenzisi owongeziweyo yenziwe ngokuzenzakalelayo.
Iphakheji ye-nscd, eyayisetyenziselwa ukugcina i-database yomsebenzisi kunye ne-host host (/etc/hosts, /etc/passwd, /etc/services, etc.), iye yarhoxiswa. I-Systemd-resolved ngoku isetyenziselwa ugcino lwe-host caching, kwaye i-sssd isetyenziselwa ukugcinwa kwedatha yedatha yomsebenzisi.
Fumana iFedora 36
I-Fedora Workstation, i-Fedora Server, i-CoreOS, i-Fedora IoT Edition kunye ne-Live builds zilungele ukukhutshelwa, zinikezelwe ngendlela ye-spins nge-KDE Plasma 5, i-Xfce, i-MATE, i-Cinnamon, i-LXDE kunye ne-desktop ye-LXQt. Izakhiwo zakhelwe i-x86_64, i-Power64, i-ARM64 (AArch64) izakhiwo, kunye nezixhobo ezahlukeneyo ezine-32-bit ARM processors. Ukukhutshwa kweFedora Silverblue builds kulibaziseka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukusuka kwiLinux » Unikezelo » I-Fedora 36 sele ikhululwe kwaye iza notshintsho oluninzi, zijonge!